थाहा पाउनुहोस्, शनिबार कस्ता काम गर्नुहुँदैन
बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष शाहको कार्याकक्षमा शंकास्पद वस्तु फेला
जाजरकोट । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाहको कार्याकक्षमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ । मंगलबार बिहान खतरा लेखिएको सुतली बम जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु भेटिएपछि स्थानीयमा त्रास फैलि
फिल्म ‘कबिर सिंह’को कमाइ कति ?
एजेन्सी । बलिउडमा गएको हप्ता रिलिज भएको फिल्म हो कबिर सिंह । यस फिल्मले बक्स अफिसमा एकपछि अर्को दिन राम्रो कमाइलाई सन्तुलित राखेको छ ।
मेयरकाे घरमा बम, स्थानीय रातभर आतंकित
काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेकपाले आह्वान गरेको बन्दको पूर्वसन्ध्यामा विदुर नगरपालिकाका मेयरको निवासमा बम भेटिएको छ । मेयर सञ्जु पण्डितको विदुर–९ स्थित घरमा सोमबार राति प्रेसर कुकर बम भेटिएको हो ।
किन हुन्छ हर्मोनमा गडबडी ? यस्ता छन् लक्षण र रोकथाममा उपायहरु
काठमाडौं । हर्मोन कुनै कोष वा ग्रन्थीबाट उत्पादन हुने रसायन हो । हाम्रो शरीरमा कुल दुई सय तीन किसिमका हर्मोन हुन्छन्, जसले फरक–फरक क्रियालाई नियन्त्रण गर्छन् ।